Android Lollipop ဖြင့် LG G2 တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ Androidsis
နာရီ ၃၀ ခန့်အသုံးပြုပြီးနောက်၊ LG G2 အတွက် Androidsis တွင်မနေ့ကကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့သော Android Lollipop Romကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင် Android terminal ကိုကြိုးစားအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကနေရော အသင်း Evomagix ကြောင်းဖြတ်သန်းသောနာရီတိုင်းပိုကောင်းထက်အလုပ်ဖြစ်တယ်။
ငါအောက်တွင်ရေးထားပါလိမ့်မယ်သောပို့စ်တွင်ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ် Android Lollipop ကိုတရား ၀ င်မွမ်းမံပြီးနောက် LG G2 မှာဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။ Internal Memory ကိုမရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်လည်ခြင်းပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မှာ LG Stock G ကို Rom Stock ကဲ့သို့နှစ်ဆထိခြင်းဖြင့်သော့ဖွင့်နိုင်အောင် mod ပါဝင်သည်။
1 သင်၏ LG G2 သည် internal memory ကိုမတွေ့ပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
3 နှစ်ကြိမ်ထိပုတ်ပါက LG G2 လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း
သင်၏ LG G2 သည် internal memory ကိုမတွေ့ပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
အကယ်၍ Evomagix Android Lollipop Rom ကို flash လုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ LG G2 သည် SDcard ၏ဖိုင်များကိုမပြပါ, (ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပါသည့် LS980 မော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့ပင်), ငါတို့က device တစ်ခုချိတ်ဆက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် Android SDK ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ်သော ADB ပျက်ကွက်, USB debugging ကို enable လုပ်ပါ အဲဒီ command တွေကိုရိုက်ထည့်ပါ။
adb shell ကို
restorecon -FR / ဒေတာ / မီဒီယာ /0င
ထိုကိစ္စတွင် မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျတဲ့ terminal model နှင့်သက်ဆိုင်သော Kit Kat AOSP modem ကို flash လုပ်ရပါမည်။ အောက်ပါလင့်ခ်တွင် LG G2 အတွက်ရရှိနိုင်သော modem များအားလုံးကိုလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။
မော်ဒယ် D802 INT ။
၎င်းကို flash လုပ်ရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည် Recovery mode ကိုဝင်ရောက်ပါ နှင့် option ကိုမှ Install သင်၏သီးခြား LG G2 မော်ဒယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော modband baseband ကို flash လုပ်ပါ။ အားလုံး Wipe မဆိုကြင်နာလုပ်ဖို့မလိုဘဲ.
နှစ်ကြိမ်ထိပုတ်ပါက LG G2 လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုမည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Android Lollipop တွင်ထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် LG G2 ကိုစားပွဲပေါ်ကနေဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်နိုးပါ သို့မဟုတ်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှထုတ်ယူခြင်းကသင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိစေဘဲသင်ခံစားလိုသည် LG G2 ကိုနှိုးရန်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ, t ကိုသင်ဤ ZIP ဖိုင်ကိုသာ flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည် Recovery ကိုသူ့ဟာသူနှင့် option ကိုမှ Install မဆိုသုတ်မရှိဘဲ.
LG G2 ကိုပြန်လည်စတင်သည့်အခါ၎င်းသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်နှစ်ဆထိပုတ်သောအသုံးဝင်သောရွေးစရာမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုပြန်နှိုးနိုင်သည် အဲဒါကိုပိတ်ထားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအစေခံမည်မဟုတ်ရုံသော့ဖွင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Android Lollipop ကိုတရား ၀ င်မွမ်းမံပြီးနောက် LG G2 တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ
quickremote သို့မဟုတ် 802 တွင်အလုပ်လုပ်သောအလားတူတစ်ခုခုရှိပါသလား။ ဒီ rom နှင့်အတူသိသာ hahaha ကျေးဇူးတင်စကား
ဟိုဆေး Rios ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါတယ် ROM၊ ငါအဲဒါကိုစမ်းသပ်နေပြီးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်ပတ်တာကိုမပြုပြင်နိုင်ဘူး၊ ငါ D805 ရှိတယ်၊ ဒီ modect ကိုပြင်ဖို့ modem မရှိဘူး၊ သင်ဘာလုပ်နိုင်လဲ၊ အဆိုပါ D805 သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
jose rios အားစာပြန်ပါ
ကောင်းပြီ၊ ပို့စ်တွင်ပြောသမျှသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ကျွန်တော်အလုပ်မရနိုင်သောအရာသည်ကင်မရာဖြစ်သည်။ ငါကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါငါအမှားတစ်ခုရသူပိတ်။ တခြားဘယ်သူမှမမှားဘူးလား
လျှောက်လွှာအံဆွဲထဲရှိကင်မရာအပလီကေးရှင်းကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ထို့နောက်လျှောက်လွှာသတင်းအချက်အလက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ၊ အက်ပလီကေးရှင်း၏ cache နှင့်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းပါ။
Marcelo ortiz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ d805 မော်ဒယ်အတွက်…။ Base band သည် UNKNOWN အလုပ်မလုပ်ပါဘူး…နောက်နာရီ ၃၀ အကြာမှာမအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုများစွာအပြီးတွင်ငါ 30 အတွက် base band ကို install လုပ်ရမယ်၊ မိုဘိုင်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းသည်၎င်းသည် UU ကိုမပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်
marcelo ortiz မှစာပြန်ပါ
ငါဘာကြောင့်ထည့်သွင်းတာလဲဆိုတာကိုမင်းငါ့ကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလား။ ငါသာမာန်အရာတွေကိုရတယ် .. မက်ဆေ့ခ်ျခေါ်တယ်။ မပြည့်စုံတဲ့မီနူးကိုပြောရတယ်။ တတ်နိုင်ရင် urg ဖြေပါ။
ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် download ချရန်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါဖိုင်မန်နေဂျာသည်အမှားတစ်ခုပေးသည်။ အတွင်းသိုလှောင်မှုသည်ဖိုင်မန်နေဂျာတွင်မပေါ်ပါ။ ပို့စ်များအတွက်နှင့်အဆင့်မြင့်စားဖိုမှူးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ကောင်းပြီမှတ်ဉာဏ်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်း။ ဒီ post မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ command တွေ၊ ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာ၊ USB suppuration နဲ့အခြားအရာအားလုံးကိုဆက်သွယ်မယ့်အစား။ terminal app နှင့်ထို command များကိုရိုက်။ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အခုတော့အရမ်းကောင်းနေပြီ။
CM, LG ကတရားဝင်မဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဒီ ROM ကကျွန်တော့်ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကင်မရာကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
သင်မှန်ပါသည်၊ အမှန်တရားမှာအလွန်ကောင်းမွန်စွာရှိပြီးလှပပြီးအလွန်လှပသည်။ ထမင်းချက်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ငါတို့နှင့်အတူမျှဝေသူအားလုံးအားကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။
မကောင်းတာကစမတ်မျက်နှာဖုံးရဲ့အမြန် ၀ င်းဒိုးကိုမဖွင့်နိုင်ဘူး၊ သိပ်များလွန်းလိမ့်မယ်၊ မဟုတ်ရင်စာရွက်စာတမ်းကိုရယူသုံးစွဲနိုင်တယ်၊ စပိန်လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူး။
Andres Gomez ၊ ဟုသူကပြောသည်
ဘာတွေထူးလဲ!! ဤ ROM များသည် D805 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
Andres Gomez သို့ပြန်သွားပါ
Luis enrrique ဟုသူကပြောသည်
သတ္တုတွင်းထဲမှာငါကပိတ်ဆို့ပြီးခဏအကြာကသူ့ဟာသူသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ငါထပ်မံပိတ်ဆို့ရန်ရှိသည်ငါတောင်ပံ5ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း, ricien အခြားသူများအတွက် haha ​​screen ကိုပိတ်ထားသည် ...
luis enrrique အားပြန်ပြောပါ
စာရွက်စာတမ်းများကိုပိတ်ထားပြီးမည်သည့် application မှဖုန်းဖိုင်များကိုမျှ ဆက်သွယ်၍ မရပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ပုံမှန်အက်ပ်သည်အမှားတစ်ခုပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
ဖေလဇ်မင်း Dario အားပြန်ပြောပါ
Play deb Store ၏ terminal App နှင့် usb debugging သက်ဝင်မှုနှင့်ဤစာစောင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အမိန့်များဖြင့်စမ်းကြည့်ပါ။
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညနေခင်း !!! ငါ LG G2 ကင်မရာနဲ့ပြaနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ ငါကင်မရာအမှားတခုရလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရဘူး။
Jason Rojas ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်အတွက်တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ စနစ်ကအရမ်းကောင်းပါတယ်၊ မျက်နှာပြင်လည်ပတ်တာကကျွန်တော့်ကိုမကူညီပါဘူး။ ပြီးတော့သူကမြှောက်တဲ့အခါ screen ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ရွေးစရာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ G2 D805 ရှိတယ် LTE သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ဝိုင်ဖိုင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်
Jason Rojas ကိုပြန်ပြောပါ
သူငယ်ချင်း Jason Rojas d805 case band ကိုဘယ်မှာရခဲ့တာလဲ။
LG G2 D805 ၏လည်ပတ်မှုကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ ကြောင်းမော်ဒယ်ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ D802 baseband ကို download လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား mediafire သို့ပို့ဆောင်ပြီးထိုဖိုင်သည်ကျွန်ုပ်မတည်ရှိပါဟုပြောပါသည်
hector သံခမောက်လုံး ဟုသူကပြောသည်
ပျက်စီးသွားသော LCD အချို့အမိန့်ကိုနာမခံပါဘူး
heco Casco အားပြန်ပြောပါ
ro alberto ဟုသူကပြောသည်
roque alberto အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ Great post !! ဟေ့၊ ငါအဲဒီပညတ်တွေကိုငါဘယ်လိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရမလဲ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုလ်ဒါများကို ဖန်တီး၍ သို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များကို install လုပ်၍ မရပါ။ Swiftkey ကီးဘုတ်တွင်ဘာသာစကားအထုပ်များကိုပင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်ပါသည် !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ g2 ကင်မရာတွင်အလှည့်မခံရပါကသူငယ်ချင်း၊
ငါ့မှာ lg g2 ရှိတယ်၊ အော်ပရေတာတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကို screen နဲ့ထိသမျှကိုပြောပေမဲ့အဲဒါကငါ့ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူး။ ဖုန်းနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြောပြနိုင်မလား။
ကောင်းတယ်ဟေးကျွန်ုပ်၏ terminal တွင် lollipop မူကွဲကို update လုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ထိတွေ့မှု၌ပြpresentsနာတစ်ခုတွေ့နိုင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားတုံ့ပြန်မှုမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်ရေးသောအခါတိကျသောအက္ခရာများမဟုတ်ပါ။ ။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာဘာကြောင့်လဲ။
အဲရစ် salvatore ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ငါ့မှာ LG g2 d805 ရှိပြီး Internal Storage GB ကိုမသိဘူး။ ၎င်းသည် 10.6gb သာပြသပြီးကျန် 21gb ကို system data folder မှအသုံးပြုသည်။
အဆက်အသွယ်တွေကကျွန်တော့်အတွက်မကောင်းဘူး။ wusap မှာသူတို့ကိုမွမ်းမံဘူး
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း၊ ဗင်နီဇွဲလားမှငါပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ LG G2 D803 ရှိတယ်။ အဖွဲ့သည်ဖန်သားပြင်အထက်ပိုင်းမှာပြသနာစတင်ခဲ့တယ်၊ ထိတွေ့မှုကအဲဒီအပိုင်းမှာအလုပ်မလုပ်ဘူး။ နည်းပညာရှင်တစ် ဦး သည် software update ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခြားချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူသည်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမရရှိခဲ့ပါ။ ဖန်သားပြင်၏ထိပ်ရှိမီးစိမ်းသည်မှာ မှစ၍ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖွင့်ထားသည်။ အသင်းကိုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုတစ်ယောက်ယောက်ကအကြံပေးနိုင်မလား။